Apple nifampiraharaha tamin'i Sharp ny famatsiana ny efijery OLED ho an'ny 2017 | Vaovao IPhone
Apple dia mifampiraharaha amin'ny Sharp ny famatsiana fampisehoana OLED ho an'ny taranaka manaraka amin'ny iPhone
Apple dia mampiasa teknolojia écran LCD ho an'ny iPhones, saingy toa hiova amin'ny taona vaovao ity miaraka amin'ny iPhone vaovao honohono ho an'ny 2017, taorian'ny fanovana kely natao tamin'ny iPhone 7. Betsaka ny tatitra nilaza IPhone manaraka, nantsoina hoe 'iPhone 8', dia hisongadina ny fampisehoana OLED sambany. Androany tatitry ny Bloomberg manondro an'izany Apple dia mifampiraharaha amin'ny Sharp amin'ny famokarana fampisehoana OLED ho an'ny telefaonin'izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, ny hany vokatra Apple izay mampiasa fampisehoana OLED dia ny Apple Watch. ny Ny fampisehoana OLED dia manana fifanoherana tsara kokoa noho ny fisehoan'ny LCDsatria tsy misy jiro ao anatiny miaraka amin'ny OLED. Manana jiro pixel tsirairay avy izy ireo ka rehefa aseho ny loko mainty dia vonoina ireo piksel ary tsy mamoaka hazavana mihitsy. Izy ireo koa dia manana fantsona kely kokoa noho ny herinaratra rehefa naseho ilay interface mainty satria ny ankamaroan'ny efijery dia mety ho faty fotsiny, toetra iray izay hararaotin'ny fampiasa maizina an'ny Apple Watch.
Ny fampisehoana OLED dia manolotra tahan'ny fifanoherana tena tsara sy fanjifana bateria ambany rehefa maizina ny fampisehoana atiny (izany dia mitarika tsaho momba ny "maizina mode" ho an'ny iOS 11). Izy io koa dia sendra singa maivana manify raha oharina amin'ny efijery LCD noho ny tsy fisian'ny jiro aoriana. Ireo toetra rehetra ireo dia ilaina amin'ny iPhone manaraka. Ny fampisehoana OLED dia azo atao miforitra sy malefaka ihany koa., izay mamela ireo singa famolavolana toa ny fisokafan'ny efijery amin'ny sisiny. Samsung dia manao izany amin'ny fitaovana ampiasainy toa ny Samsung Galaxy S7.
Samsung, mpifaninana lehibe amin'i Apple eo amin'ny sehatry ny smartphone, dia nampiasa fampisehoana OLED tamin'ny findainy Samsung Galaxy nandritra ny taona maro. Toa ny taona 2017 no taonan'ny efijery OLED mba hiditra ao amin'ny iPhone.
Milaza izany ny tatitra Sharp dia mety hanidy ny fifanarahana amin'i Apple raha afaka mampanantena "fahaiza-mamokatra" ampy izy. Talohan'ity andro ity dia nanambara famatsiam-bola $ 500 tapitrisa i Sharp hanamboarana fampisehoana OLED, fa ny tombony azo amin'izany dia tsy ho hita mandra-paran'ny faran'ny taona 2018. Amin'ny ankapobeny, Apple dia te hanana orinasa samihafa mamatsy faritra ho an'ny vokatra vokariny. ny bottlenecks fampisehoana ary mamela azy ireo hifampiraharaha amin'ny vidiny tsara kokoa, satria ny orinasa tokana dia tsy mifehy ny rojom-panomezana iray amin'ny singa iray nomena.
Ny iPhone 8 dia hiatrika famolavolana endrika telefaona lehibe, mamela ny famolavolana miverimberina an'ny iPhone 7, iPhone 6s ary iPhone 6. Apple dia toa mikendry "famolavolana fitaratra" miaraka amin'ny bokotra sy sensor ID touch touch izay napetraka ao anaty fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia mifampiraharaha amin'ny Sharp ny famatsiana fampisehoana OLED ho an'ny taranaka manaraka amin'ny iPhone
Alvaro G. dia hoy izy:
Raiso ny volako azafady ... !!! Omeo ahy izao ... !!!!! 😛
Valiny tamin'i Alvaro G.
Efa mitsitsy vola ho an'ny iPhone 8 manaraka, tsingerintaona faha-10 aho.
Marika ho antsika izay nanana iPhone hafa hatramin'ny nanombohany, tamin'ny 2007.
Hijanona hatrany isika ..
Mitahiry sahady? Hahahaha, tsara, elatra mahazatra aho herinandro iray alohan'ny fandefasana azy, amidiko ilay 7, manofa 300 € aho, avy eo esoriko ny VAT sy ny iPhone 8 satria hiantsoana azy io
Ahoana ny famoahana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka avy amin'ny Mail miaraka amin'ny iOS 10
Zerodium dia manolotra loka 1,5 Jailbreak ho an'ny iOS 10